8 Fikradaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican | Save A tareenka
Home > Safarka Mareykanka > 8 Fikradaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican
Tareen safarka Shiinaha, Tareen Safar Talyaani, Tareen safarka Ruushka, safarka Europe, Safarka Mareykanka
Sannadkan waxaad fursad u leedahay inaad sahamiso waxyaabaha cajiibka ah ee adduunka ka jira iyadoo sharciyada socdaalka lagu sii wado in laga dhigo kuwo wanaagsan. Goobihii fasaxa ee horay loo xiray ayaa si tartiib tartiib ah dib ugu furmaya maaddaama dunidu ay isku hagaajisay la noolaanshaha safka faafa.. Halkan waxa ku jira 8 Fikradaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican 2021 inaad tixgeliso.
Safarka tareenka waa nooca ugu fiican ee deegaanka u fiican ee dhaqdhaqaaqa. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
Gobolkani wuxuu ku yaal bariga Massachusetts waana mid ka mid ah gobollada ugu dalxiiska badan Xeebta Bari. In 2021, wali waxay ku sarreysaa jaantusyada sida mid ka mid ah meelaha safarka dhalashada ugu wanaagsan. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku arki karto aaggan oo ay ka mid yihiin xeebaha quruxda badan, beeraha, nalalka taariikhiga ah, iyo madadaalo badan oo dabiici ah. Intaad booqanayso magaaladan, waa muhiim inaad raadiso hoy aamin ah. Kirada fasaxa ayaa sameysa xulashada ugu fiican markay tani timaado. Halkii aad dagi lahayd qol hudheel cidhiidhi ah, waxaad dooran kartaa inaad sii joogto mid ka mid ah Cape Cod badan oo raaxo leh kirada fasaxa. Tani waxay ku siin doontaa dareen la mid ah guriga maxaa yeelay waxaad heli doontaa adeegyo sida jikada iyo qolka dharka lagu dhaqdo iyo qalabka sida Qalabka HVAC. Tani waxay ku timaaddaa mid waxtar leh gaar ahaan goorta Tegay qoyska maaddaama aad fursad u heli doontid inaad sameysid cunto qalbi furan oo aad nadiifiso inta aad joogto. Intaa waxaa dheer, waxaa jira xoogaa shahaado qarsoodi ah oo kirada fasaxa ah marka la barbar dhigo hudheel.
2. Fikradaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican 2021: Alaska
Inkasta oo ay juquraafi ahaan ka go'antahay Maraykanka, Alaska waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan uguna qurxoon ee la booqdo. Waa meesha dhalashada ugu fiican ee loogu talagalay fasaxa barafka ee carruurta. Markaad tagto qaybtan dalka ka mid ah, waxaad arki doontaa glaciers fog, buuraha cirka isku shareeraya, moose haybad, 12ft-dhaadheer, iyo xeebo badan oo cidla ah. Meelaha ugu sareeya ee aad ku booqan karto Alaska waxaa ka mid ah Denali National Park, halkaas oo aad ka heli doonto inaad aragto bahalaha, yeey, iyo moose. Waxa kale oo aad fursad u heli doontaa inaad ku lugeeysid Webiga Savage maadaama aad u bogi karto biyaha weli deggan. Hadaad jeceshahay inaad kalluumeysato, waxaad fursad u heli kartaa inaad booqato xarunta kalluumeysiga ee Alaska, Homer. Intaa waxaa dheer, waad ka tagi kartaa cidlada waxaadna aadi kartaa Anchorage oo ah magaalada ugu weyn Alaska. Markaad booqato Alaska adiga iyo reerkaaga, waa inaad hubisaa inaad booqatay Dalxiiska Maalinta Arctic Circle ee Fairbanks iyo Matanuska Glacier Tour maalin dhan. Labadan dalxiis ayaa dhameystiri doona fasaxaaga Alaskan.
3. Grand Canyon Ee Arizona
In kasta oo ay helaan ku dhowaad shan milyan oo soo booqdayaal ah sanadkiiba, Grand Canyon wali wuxuu ka mid yahay meelaha ugu wanaagsan ee lagu booqdo 2021. Waa astaamaha ugu caansan Mareykanka gudihiisana wuxuu uga muuqdaa qurux dhinac walba. Waad tegi kartaa socodka gobolkaan ama waxaad ku raaci kartaa helikobtar si aad ugu raaxeysato muuqaalka muuqaalka hawada. Waxaad ka geli kartaa woqooyi iyo koonfurta qararka dhinacyada ka soo horjeedka webiga. Dadka badankood waxay doorbidaan booqashada Grand Canyon National Park’s South Rim maxaa yeelay marwalba way furantahay xitaa xilliga qaboobaha. Waad qaadi kartaa darawallada waddooyinka midkood gaar ahaaneed ama adigoo adeegsanaya basaska basaska dalxiiska ee aaggan si aad ugu raaxaysato aragtida lamadegaanka. Ee Canyon Grand, waxaad ka arki kartaa wax ka badan 447 noocyada shimbiraha ee jira, ku hoydaan meel cidla ah habeenkii, oo kaqeybqaado waxqabadyo xiiso leh sida rafting. Gobolkan, fursadaha madadaalo waa kuwo aan dhammaad lahayn!
4. Fikradda Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican 2021: Xadiiqadda Qaranka ee Crater Lake
Waxay ku taal Oregon, Lake Crater waxay degtaa konton iyo saddex kilomitir oo laba jibbaaran. Harada dhexdeeda waxay ku fadhidaa buurta Mazama dhexdeeda taas oo laga sameeyay 7000 sanado kahor qarax. Waxay leedahay biyo buluug ah oo bixiya muuqaal qurux badan oo cabsi kugu reebaya. Quruxda haradaasi waa taa waxaad tegi kartaa quusitaanka biyaha qiyaastii 2000ft haddii aad jeceshahay madadaalo noocaas ah. Si aad ugu raaxaysato safarkaaga aaggan, waxaad u baahan tahay inaad ku qaadato seddex maalmood sahaminta dhammaan waxyaalaha yaabka leh ee harooyinka ay bixiyaan.
5. Dunida Disney
Liiska ugu dambeeya ayaa ah Disney jardiinooyinka mawduuca iyo meelaha loo dalxiis tago ee Orlando. Meeshan xiisaha lihi waxay ka dhigeysaa meesha ugu wanaagsan ee dhalashada dhalashada loogu talagalay dadka gebi ahaanba ka madhan hawlahooda maalinlaha ah. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay kalkaaliyayaasha shahaado haysta ee dhamaystay NCLEX RN imtixaan u baahan tahay fasax baashaal. Nasiib iyaga u ah, tan iyo sanadkii uu bilawday, jardiinooyinka badankood dib ayaa loo furay waxayna diyaar u yihiin ganacsi. Marka la eego sida ay caan u tahay, goobtani badanaa way camiran tahay sidaa darteed waa inaad qorshaysaa booqashadaada si xigmad leh. Si aad ugu raaxaysato joogistaada, waxaad u baahan doontaa inaad ku ekaato 6-7 maalmood. Qaar ka mid ah soojiidashada aad should damacsan yahay in la arko waxaa ka mid ah Burcad Badeedda Kariibiyaanka ah, Peter Pan ee Duulimaadka iyo kuwa kale.
6. Meelaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican 2021: Venice Gudaha Talyaaniga, Europe
Waxay ku taal waqooyi-bari Talyaaniga, Venice waa aragti lagu fiiriyo dadka safarka ah. Waa caasimada gobolka Veneto waana ka kooban yahay 118 jasiirado yaryar oo ay kala baxeen kanaallada. Jasiiradahaas waxaa isku xira in ka badan 400 buundooyinka. Wadooyin ma jiraan, taasoo la macno ah inaanay jirin buuq badan. Dadku waxay ku safraan doonyo kanaallada, ugu adeegida martida bandhigyo cajiib ah oo aan lagu arki karin meelo kale. Venice waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan adduunka, ku qorista iyada oo ah mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee loogu talagalay socdaalka iyo sawir qaadayaasha 2021. Waxaa intaa dheer, Venice waxaa loo yaqaanaa inay tahay mid jaceyl aan caadi aheyn dabiicadeeda. Venice sidoo kale waxay liis garaysaa liisas badan oo ah kuwa ugu badan magaalo qurux badan dunida oo dhan. Waxay ugu wacan tahay bixitaankeeda gaarka ah ee aan waddo lahayn, dhismayaasha guridda cajiibka ah, iyo canaasiir taariikhi ah oo laga helay dhismihiisa.
7. Meesha ugu Wanaagsan ee Socdaalka Dhalashada 2021: Lake Baikal, Russia
Ahaanshaha wadanka ugu weyn aduunka, Ruushka wax badan ayaa laga helaa oo ay ku jiraan xeebaha, buuraha, iyo dhismayaal taariikhi ah. Si kastaba ha ahaatee, Harada Baikal ayaa ah meesha ugu sarreysa ee safrayaal badan iyo sawir qaadayaal. Waa mid ka mid ah harooyinka ugu caansan adduunka, iyadoo warbixino badan oo sheeganaya ay ka badan yihiin 25 milyan sano jir ah. Sidoo kale waa harada ugu qoto dheer adduunka, gaarayo qoto dheer ugu 1642 mitir. Waa maxay more? Baikal waa harada biyo-macaan ee ugu weyn adduunka. In ka badan 20% biyaha dabiiciga ah ee adduunku waxay ku nool yihiin balligan. Ku dhowaad 5 bilood sanadkiiba, harada ayaa ku hoos jirta lakab adag oo baraf ah. Si kastaba ha ahaatee, weli waa suurtagal in la arko qoto dheer sida 40 mitir hoostiisa. Ku dhowaad 10 bilood sanadkiiba, biyaheeda waxay kujiraan heerkul baraf ah 5 darajooyinka Celcius. Si kastaba ha ahaatee, qiyaastii bisha Ogosto, heerkulkeedu kor ayuu u kacaa 16 degrees Celsius, taas oo ka dhigaysa wax ku fiican dabbaal deg deg ah iyo quusin.
8. Darbiga Weyn Ee Shiinaha
In kasta oo Shiinuhu u koray oo noqday waddan tiknoolajiyad ahaan horumarsan maanta, weli ma lumin soo jiidashada iyo xiisaha ay u lahayd markii ugu horreysay ee la ogaaday. Waxaa jira waxyaabo badan oo la jecleysto oo qarsoodi ah oo ku saabsan Shiinaha, laakiin Darbiga Weyn ayaa ugu sarreeya qiimeynta iyo darajooyinka oo dhan. Sida laga soo xigtay oraah caan ah oo Shiineys ah, “Qofna ma noqon karo halyeey run ah ilaa uusan ku sugneyn darbiga weyn”. Kordhinta wixii ka dheer dherer ah 6000 kiiloomitir, Taalladan weyn waa mid ka mid ah nooceeda, waana mid waajib ku ah booqashada qof kasta oo safar ah. Dhexdhexaadkiisu dhererkiisu waa hareeraha 6 si ay u 8 mitir, si kastaba ha ahaatee, way dhaaftaa intaas 16 mitir marka ay ugu sarreyso. Waa ballaadhan tahay in ka badan 10 socodka ayaa ku dul socon kara dhinac dhinac. Darbigu wuxuu leeyahay qalcado fara badan oo cajiib ah, si kastaba ha ahaatee, kuwii ugu da'da weynaa waxaa dib loogu taariikheeyay qiyaastii qarnigii 7aad ee dhalashadii Ciise ka hor. Darbiga Weyn waa khibrad hal mar noloshaada oo dhan ah oo aan la seegi karin qiime kasta ha ahaatee.
8 Fikradaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican 2021: Gunaanad
Halka laga yaabo inaad fasaxday fasaxaagii 2020 cudurka faafa awgeed, wali waad qaadan kartaa safarkaas sanadkaan. Si kastaba ha ahaatee, hubi inaad qaaddo dhammaan tillaabooyinka aad ku keydinaysid adiga kharashka gaadiidka. Waa inaad higsato inaad ugu yaraan booqato Cape Cod, Alaska, Wabiga weyn, Lake Crater, iyo Disneyworld. Bilaw qorsheynta safarkaaga maanta si aad ugu raaxaysato safaradaada. Waxaan door bidnay inaan ku raacno tareen inta aad kari karto sidaa darteed waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa aragtida ugu fiican.
halkan at Save A tareenka, waanu ku faraxsanaan doonaa inaan kaa caawino qorsheynta mid ka mid ah kuwan 8 Fikradaha Safarka Maalinta Dhalashada Ugu Fiican 2021 tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "8 Meelaha Safarka ee ugu Fiican 2021" bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, oo waxaad u badali kartaa / fr / ru ama / de iyo luqado badan.
BestDestinations dhalasho jiheeyaha TravelDestinations TravelDestinations2021 TravelingDuringPandemic